သမ္မတရီဂန်၏မိခင် - မိခင်များနေ့တရားဒေသနာ | President Reagan's Mother - A Mother's Day Sermon | Real Conversion
PRESIDENT REAGAN'S MOTHER-
မေလ ( ၁၀ ) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
ကျွနု်ပ်နှင့်အတူ သင်တို့၏ကျမ်းစာရှိ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး ၂၊ အပိုဒ်ငယ် ၂ ကို ဖတ်ကြပါစို့။ ထိုကျမ်းမှာ Scofield Study Bible တွင် စာမျက်နှာ ၇၂ တွင် တွေ့ရပါ သည်။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး ကျယ်ကျယ်လေးဖတ်ကြပါစို့။
"မိန်းမသည် ပဋိသန္ဓေယူသဖြင့် သားယောကျ်ားကိုဘွားမြင်လေ၏။ ထိုသား သည် အဆင်းလှကြောင်းကို အမိမြင်လျှင်၊ သုံးလပတ်လုံးဖွတ်ထားလေ၏။" (ထွက် ၂း ၂ )
ဤသည်မှာ မောရှေ၏မွေးသက္ကရာဇ်ကို ရေတွက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ မောရှေ၏မိခင် သည် ယောခေဗက် (Jochebed) ဟု အမည်ရသည့် ဟေဗြဲ အမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ အီဂျစ်ဘုရင် ဖာရောက ဟေဗြဲယောကျ်ားလေးတိုင်းကို မြစ်ထဲသို့ပစ်ချရန် အမိန့်ချမှတ်သောအခါ မောရှေ၏ မိခင် ယောခေဗက်သည် ၄င်း၏သားငယ်လေးအား သုံးလကြာဖွတ်ထားခဲ့သည်။ နောက်ထက် ဝှက်ထား၍မရနိူင်တော့သည့်အခါ သူမသည် ဆွဲခြင်းလေးသဖွယ် သင်္ဘောလေးတစ်ခုကိုပြု လုပ်ပြီး ထိုအထဲသို့ထည့်ကာ ဖာရောဘုရင်၏သမီးရေချိုးဆင်းရာအရပ်ဆီသို့ မြစ်ရေပေါ် မျှော ချလိုက်သည်။ ယောခေဗက်က သူမ၏သားငယ်လေးတွင် တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်မှာ ဖာရောဘုရင်၏သမီးကသူ့ကိုကယ်တင်ရန်ဖြစ်နိူင်ချေရှိသည်ကို သိတော်မူခဲ့သည်။ သူမသည် သူမ၏ကလေးကို ကျူပင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသင်္ဘောထဲတွင် ထည့်ထားကာ ဖာရောဘုရင် ၏သမီးလေးရေဆင်းချိုးရာနေရာသို့ မျှောသည်ကို စောင့်ကြည့်နေသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူမ၏ဆုတောင်းချက်ကို နားညောင်းပြီး ဖာရောဘုရင်၏သမီးသည် ကလေးကို "မေတ္တာထား လျက်" နှုတ်ယူလေသည်။(ထွက် ၂း ၆ )
ဘုရားသခင်၏ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင် ဖာရောဘုရင်၏သမီးတွင် ကလေးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ဟေဗြဲအမျိုးသမီးကို ရှာဖွေရန် အစေခံများရှိပါသည်။ သူတို့သည် မိခင်အ ရင်းဖြစ်သောယောခေဗက်အား ၄င်းကလေးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြ သည်။ ယောခေဗက်သည် မောရှေအား ၁၀ နှစ် သို့မဟုတ် ၁၂ နှစ်အရွယ်အထိ ဂရုတစိုက်ပြုစု စောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။ ထိုနောက်ပိုင်းတွင် သူသည် ဖာရောဘုရင်၏သားတစ်ဦးအဖြစ် အီဂျစ် နန်းတော်တွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။
"မောရှေသည်လည်း အဲဂုတ္တုအတတ်ပညာအလုံးစုံတို့ကို သင်၍၊ နှုတ်သတ္တိ၊ လက်သတ္တိရှိ၏။" ( တမန် ရး ၂၂ )
မောရှေသည် ဖာရောဘုရင်၏နန်းတော်တွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ သူသည် အီဂျစ်ဘာ သာရေးအကြောင်းအရာအားလုံးကိုလည်း သင်ယူလေ့လာခဲ့သည်။ သူသည် အီဂျစ်လူဖြစ် သည်ဟု လူတိုင်းထင်ထားကြသည်။ သို့ရာတွင် ၄င်း၏စိတ်နှလုံးသားထဲတွင် မောရှေသည် ဘုရားသခင်ကို သိတော်မူခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ ၄င်း၏မိခင်အရင်းဖြစ်သောယောခေဗက် သည် သူ့အား သူငယ်စဉ်ထိန်းကျောင်းမှုပြုသောအချိန်တွင် ဘုရားသခင်အကြောင်းနှင့် ၄င်း၏ဟေဗြဲအမွေအနှစ်အကြောင်းကို ပြောတော်မူခဲ့ပြီး
ယောခေဗက်က မိမိသားအပေါ်လွှမ်းမိုးထားမှုသည် အီဂျစ်ရှင်ဘုရင်ဖာရော၏လွှမ်းမိုး မှုထက်သာ၍ ကြီးမားလှပါသည်။ သူမ၏လွှမ်းမိုးမှုသည် "အီဂျစ်ဉာဏ်ပညာအားလုံး" ထက်ပင် သာ၍ ကြီးမားလှပါသည်။( တမန် ရး ၂၂ ) မောရှေသည် အရွယ်ရောက်လာသောအချိန်တွင် သူမိခင်၏ဘုရား၏နောက်တော်သို့လိုက်ရန်အတွက် အီဂျစ်ဘုရားများကို ငြင်းပယ်ကြောင်း ကျမ်းစာက ဆိုထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုထားပါသည်။
" မောရှေသည် အသက်အရွယ်ကြီးလာသောအခါ အပြစ်ရှိသောကာမဂုဏ်ကို ခဏခံစားခြင်းထက်၊ ဘုရားသခင်၏လူတို့နှင့်အတူညှဉ်းဆဲခံရခြင်းကို သာ၍ အလိုရှိသဖြင့်၄င်း၊ အဲဂုတ္တုပြည်၏စည်းစိမ်ထက် ခရစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်း ဒုက္ခသည်သာ၍မြတ်သောစည်းစိမ်ဖြစ်သည်ကို စိတ်ထင်သဖြင့်၄င်း၊ ယုံကြည် ခြင်းစိတ်ရှိ၍၊ ဖာရောဘုရင်၏သမီး၏သားဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုပယ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ နောက်ရလတံ့သောအကျိုးကို ထောက်စာမျှော်လင့်နေ၏။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ရှင်ဘုရင်အမျက်ကို မကြောက်ဘဲ၊ အဲ့ဂုတ္တုပြည်ကိုစွန့် သွား၏။ အကြောင်းမူကား၊ မျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်ကို မြင်ရဘိသကဲ့သို့ တည်ကြည်ခြင်းရှိ၏။" (ဟေဗြဲ ၁၁း ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၇)
မောရှေသည် သူအမေ၏ယုံကြည်ခြင်း၏လွှမ်းမိုးခြင်းကို လွန်စွာခံရသည်။ သို့သဖြင့် အီဂျစ် ပြည်၏စည်းစိမ်၊ တန်ခိုးနှင့်သင်ယူလေ့လာထားသမျှသောအရာသည် သူ့အမေယုံကြည်သော ဘုရားသခင်၏နောက်တော်သို့လိုက်ခြင်းမှ ရပ်တန့်သွေဖယ်စေခြင်းမပြုနိူင်ပါ။
သမိုင်းတစ်လျှောက်လေ့လာသောအခါ ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းသောမိခင်များသည် ၄င်းတို့၏သားသမီးများကို လွှမ်းမိုးကြပေသည်။ သမ္မတ Theodore Roosevelt က ဤသို့ဆို သည်။
မိခင်းကောင်း၊ ဉာဏ်အမြော်အမြင်ရှိသောမိခင်သည် ကျွမ်းကျင်သောပုဂ္ဂိုလ် ထက် လူအဖွဲ့အစည်းတွင် ပို၍ အရေးကြီးလှသည်။ သူမ၏ပြုစုစောင့်ရှောက် မှုတို့သည် ဂုဏ်ပြုရန် ထိိုက်တန်လှပြီး မည်မျှပင်အောင်မြင်မှုတွေဆွတ်ခူးနေ ပါစေ အခြားပုဂ္ဂိုလ်ပြုစုစောင့်ရှောက်သူထက် အဖွဲ့အစည်းတွင် ပို၍ အသုံး ဝင်သူဖြစ်ပါသည်။
သမ္မတ Theodore Roosevelt မှန်ကန်ပါသလား။ ဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်မိသည်။ ထိုအရာကို ယောခေဗက်၏အသက်တာက ပြသခဲ့သည်။ သူမ၏သားမောရှေသည် သမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံးနှင့် ဘုရားတရားကိုင်းရှိုင်းသောလူတို့တွင် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် ဟေဗြဲလူမျိုးများအား ကျွန်ခံရာအီဂျစ်ပြည်မှုခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် အီဂျစ်ပြည်ရှိ ရုပ်တု ကိုးကွယ်သည့်နေရာကြားတွင်ပင် ဘုရားသခင်ကိုချစ်သောမိခင်ထံမှသင်ယူသမျှသောအရာ များကို လုံးဝမမေ့နိူင်ခဲ့ပါ။
ထိုအရာသည် ယနေ့ခေတ်ကာလကိုလည်း ဆုတ်ကိုင်ထားပါသည်။ အမေရိကန်ပြည် ထောင်စု၏လေးဆယ်ယောက်မြောက်သောသမ္မတ Ronald Wilson Reagan နှင့်၄င်း၏မိခင် Nelle Reagan မှတပါး ဤပုံဥပမာထက်ကြီးမြတ်သောအရာမရှိဟု ကျွနု်ပ်ထင်မိသည်။
Ronald Reagan သည် အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၊ တမ်ပီဂိုမြို့ငယ်လေးတွင် ၁၉၁၁ ခုနှစ် ကမွေးဖွါးခဲ့ပြီး ဂျက်နှင့် Nelle Reagan တို့၏ဒုတိယသားလည်းဖြစ်သည်။ Ronald Reagan ကို ဖခင်က "ဒတ်ချ်" ဟုအမည်ပေးထားသည်။ နာမည်ကိုရေးထိုးပြီး အရင်းနှီးဆုံးသောသူငယ် ချင်းများက ယနေ့အချိန်တွင် တင်ကျန်သော သမ္မတ "ဒတ်ချ်" ဟုမကြာခဏခေါ်တတ်ကြ သည်။ သို့ရာတွင် ဒတ်ချ်ဖခင်သည် ကစ်သလစ်ဂိုဏ်ဝင်ဖြစ်ပြီး အရက်ကို ဖိဖိစီးစီးသောက်သုံး သူလည်းဖြစ်ပါသည်။ သူ၏မိခင် Nelle မှာ ယုံကြည်ခြင်းကို အလေးအနက်ထားသော ပရိုတဲ့ တင်းဖြစ်သည်။
Jack Reagan သည် ပို၍ကောင်းသောအလုပ်ကိုရှာဖွေထားသည်ဖြစ်၍ သူ၏မိသားစု ကို ထိုပတ်ဝန်းကျင်းတွင် ပြောင်းရွေ့စေခဲ့သည်။ သူတို့သည် နောက်ဆုံးတွင် ငါးအိမ်အထိ ပြောင်းရွေ့ငှါးရမ်းနေထိုင်ရာ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၊ တိုင်စွမ်သို့ တမ်ပီဂိုမှပြောင်းရွေ့နေထိုင်ခဲ့ကြ သည်။ သူ၏အိမ်နီးချင်းတစ်ဦးက "သူတို့သည် ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဆင်းရဲ့ ချို့တဲ့ကြတယ်" ဟုဆိုခဲ့ဖူးသည်။
နေရာပေါင်းမြောက်များစွာသို့ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ခြင်းက "ဒတ်ချ်" အား ရှက်ကြောက် ဖွယ်ရာ၊ အထီးကျန်စရာဖြစ်လာစေပါသည်။ ဒတ်ချ်က ကလေးတစ်ယောက်အနေဖြင့် "သူ သည်သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖွဲ့ရာတွင် အလွန်ပင်နှေးကွေးလှသည်။ အချို့သောနည်းလမ်းများ တွင် လူများကိုချဉ်းကပ်ရန် ဤနောက်တွန့်နေခြင်းက ကျွနု်ပ်အား လုံးလုံးလျားလျားချန်ထားခဲ့ ခြင်းမရှိဟု ကျွနု်ပ်ထင်သည်" ဟုဆိုပါသည်။ ကျွနု်ပ်သည် သူ့အား ၄င်း၏ရုံးခန်း၌ မိသားစုနှင့် အတူတွေ့ဆုံခဲ့သည့်အချိန်တွင် သူနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ရှက်ကြောက်မှုအာရုံကို ခံစားမိခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် သူသည် သမ္မတတစ်ဦးအနေဖြင့် ကောင်းစွာဖုံးအုပ်နိူင်ခဲ့သည်။ သင်တို့သည် ကျွနု်ပ်ကလေးများ၊ မိန်းမနှင့် ကျွနု်ပ်တို့သည် သမ္မတနှင့်အတူရိုက်ထားသည့်ဓါတ်ပုံကို အလယ် ထပ်တွင် သင်တို့တွေ့မြင်နိူင်ပါသည်။
ယခုတွင် ကျွနု်ပ်သည် ဘုရားသခင်နှင့်ရိုနယ်ရီဂန်ထံမှ ဒေါက်တာပေါကင်ဂိုအားဖြင့် တိုက်ရိုက် ကိုးကားမည်။ (Harper Collins Publishers, ၂၀၁၄ ) ကျွနု်ပ်သည် စာပိုဒ်ပေါင်း များစွာကို ကိုးကားမည်ဖြစ်သည်။
[ရိုနယ်ရီဂန်]သည် ပထမတွင် အထီးကျန်ဆန်သည့်လူငယ်တစ်ဦးကဲ့သို့ ဘုရားသခင် ကို ရှာဖွေထိတွေ့ခဲ့သည်။ [သူ့ဖခင်၏] အခြားဆုံးရှုံးခြင်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် ဒတ်ချ်အား ဘုရားသခင်ထံသို့လှည့်ပြန်စေခြင်းကိုပေးထားသည်။ ရီဂန်၏ ၁၁ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကို ကျင်း ပပြီးမကြာမှီ သူသည် ဘာမျှမရှိသည့် အိမ်သို့ပြန်ရန် မျှော်လင့်ထားပါသည်။ သို့စေကာမူ အိမ် ရှေ့နှင်းတောထဲတွင် သူ့ဖခင်အရက်မူးပြီး ခြေပစ်လက်ပစ်ကိုးယိုးကားယားလဲလျောင်းမိသည် က သူ့ကိုချောက်လှန့်မိပါသည်။ "သူသည် အရက်သမားဖြစ်သည်။" သူ့သားလေးက "လောကကြီးကိုပျက်စီးစေသည်" ကို သတိရမိသည်။
ဒတ်ချ်သည် သူ့အဖေ၏ကုတ်အကျင်္ီကိုလုယူပြီး သူ့အား တံခါးဘက်ဆီသို့ဆွဲထုတ် လိုက်သည်။ သူသည် အိမ်ထဲသို့ တရွက်တိုက်ဆွဲခေါ်ပြီး အိပ်ခန်းထဲသို့ပို့လိုက်သည်။ ၄င်း သည် ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အခိုက်အတန့်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ဒတ်ချ်သည် စိတ်မဆိုးပါ၊ မကျေမနပ်ဖြစ် သည်လည်းမဟုတ်၊ ဝမ်းနည်းရုံသက်သက်သာဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့ကမ္ဘာသည် ပရမ်းပတာဖြစ်ခဲ့ရ ပြန်ပါသည်။ သူသည် အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးသည်။
လူငယ်လေးရီဂန်၏ဝိညာဉ်ရေးရာတိုးတက်မှုတွင်ရှိသည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော အချိန်ကာလတစ်ခုသည် ဖြစ်ပျက်ခဲ့လေသည်။ လေးလကြာပြီးနောက်တွင် သူသည် ဗတ္တိဇံကို ခံမည်ဖြစ်၍ အသင်းတော်ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ဘဝကိုစတင်တော့မည်။ နှင်းတောထဲတွင် ခြေပစ် လက်ပစ်လဲလျောင်းနေသော သူ့ဖခင်၏အတွေးသည် သူ့ဘဝ၏ကျန်ရှိနေသောအချိန်ကဲ့သို့ ထိုနေ့ရက်က ရီဂန်၏စိတ်ထဲတွင် ရစ်ဝဲနေသည်။
[ထိုအချက်တွင် သူ့မိခင်သည်] ရိုနယ်ရီဂန်အား ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်လာရန် ဦးဆောင်ခြင်းတွင် ပုံသွင်းပေးထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အထ္ထုပတ္တိရေးသူများသည် တိုင်ဆွင်တွင်ရှိသည့် Nelle ၏ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့ ကြသော်လည်း တင်ပီဂိုရှိအသင်တော်၌ သူမ၏ကနဦးအခန်းကဏ္ဍမှာ သတိထားရသင့်သည်။ [သူ့ဖခင်] ကမိသားစုအား အခြားနေရာကို မပြောင်းရွေ့မှီ နောက်ဆုံးလတွင် Nelle သည် အသင်းတော်တွင် တက်တက်ကြွကြွရှိလှသည်။ ၁၉၁ဝနိူးထမှုသည်လည်း ထိုအရပ်တွင် ဖြစ် ပေါ်ခဲ့သည်။ Nelle သည် သင်းအုပ်မရှိသောအသင်းတော်ကို တစ်ဦးတည်းဦးဆောင်ခြင်း၊ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကျေညာချက်များကို ရေးသားထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ရုန်းကန်နေရသောအသင်း တော်သည် ကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့ရရှိရန် အသင်းသူအသင်းသားများကို နှိုးဆော် တိုက်တွန်းခြင်း၊ တရားဟောခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ပါသည်။ တင်ဆွင်သို့ပြောင်းရွေ့ပြီး နောက်တွင်လည်း Nelle သည် ဒင်ပီဂိုရှိမိခင်အသင်းတော်သို့ ဒတ်ချ်ကိုလက်နှင့်ဆွဲပြီး မကြာခဏပြန်ပြီး ကူညီလေ့ရှိသည်။
[ ထို့နောက် ရီဂန်၏မိခင်သည် တိုင်ဆွင်ရှိအသင်းတော်နှင့်ပူပေါင်းလာသည်။] [အသင်းတော်] သည် အစပိုင်းတွင် အဆောက်အဦးအတွက် ရံပုံငွေရှာဖွေစုဆောင်းခြင်းမပြုမှီ တွင် ၀ို်င်အမ်စီအေ၏ အောက်ထပ်တွင် တွေ့ဆုံလေ့ရှိကြပါသည်။ အသင်းတော်အဆောက်အ ဦးသစ်ကို ၁၉၂၂ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၈ ရက်တွင်ဖွင့်လှစ်နိူင်ခဲ့သည်။
Nelle [ရီဂန်] ဒေသန္တာရအသင်းတော်၏ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်၊ အုတ်မြစ်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ အမှူတော်လုပ်ဆောင်သည့်အပြင် သူသည် မျက်နှာပွင့်လင်းသူလည်းဖြစ်သည်။ Nelle ၏[ဥပုတ်စာဖြေကျောင်း] ကျောင်းသည်လည်း ကြီးမားလာပါသည်။ ၁၉၂၂ ခုနှစ်အ တွက်အသင်းတော်လမ်းညွှန်က သူမအတန်းတွင် ကျောင်းသား သုံးဆယ့်တစ်ယောက်စာရင်း ဝင်ထားသည်။ သင်းအုပ်၏အတန်းတွင် ငါးဦးနှင့်သူ့မိန်းမအတန်းတွင် ကိုးဦးသာရှိခဲ့သည်။
Nelle သည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာဖတ်မှတ်စရာများကို အသင်းတော်အတွင်းအပြင်များ ၌ ဝေမျှသည်။ သူမအားကြီးကြီးမားမားတောင်းဆိုထားသည့်အစီအစဉ်အတွက်ပင်ဖြစ်သည်။ ငှါးရမ်းထားသောအသံဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရပြီး သဘာဝလုပ်ဆောင်ထားသူတစ်ဦး၏ စိတ်ချမှု၊ အရည်အသွေးများကို သူမ၏သားလေးအပေါ်လက်ဆင့်ကမ်းထားပါသည်။ သူသည် ပြဇတ်ပေါင်းများစွာတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူမသည် ၁၉၂၆ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် အိမ်ကို "ယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘော" ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
Nelle သည် "စစ်ပြေငြိမ်းရေးနေ့ကဗျာ" ကို ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ၄င်းတွင် သူမက [ပထကမ္ဘာစစ်တွင်] အသက်ကိုပေးခဲ့ကြသည့်စစ်သားများကို"ကျွနု်ပ်တို့မေ့လျော့ခြင်း မရှိရန်ရန် ဘုရားသခင်ဟန့်တားထားသည်" ဟု တိုက်တွန်းပြောဆိုပါသည်။ Nelle က ထိုသတ္တိရှိသောသူများနှင့်ပါတ်သက်ပြီး "ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီအတွက် သိမ်းပိုဒ်ထားလိုက်ပြီ၊ သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်ကို အမြဲတမ်းထာဝရကံဆိုးမိုးမှောင်ကျရောက်စေသည်" ဟုရေးသားထား ပါသည်။ ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် ဂျော့ခ်ဝါရှိန်တန်၏လူငယ်ဘဝနှင့်ပါတ်သက်ပြီး "ခန့်ညားဖွယ်ရာ ဆွေးနွေးချက်" တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြထားသည့်အရာကိုပေးရန် အမေရိကန်စစ်တပ်ထဲတွင် ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထိုပုံပြင်တစ်ခုသည် [သူမ၏သားငယ်]အပေါ်တွင် ဖိအားတစ်ခုသက်ရောက် စေခဲ့ပါသည်။
ဆုတောင်းခြင်းတန်ခိုးတွင် ခိုင်မာသောယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် သူမသည် အသင်းတော်တွင် ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်တွင် ဦးဆောင်နေသည်။ အမှုတော်လုပ်ငန်းလုပ် ဆောင်ကြသည့်အချိန်တွင် သူမကို ရက်သတ္တပတ်ဝတ်ဆုတောင်းခြင်းတွင်လည်း တာဝန်ပေး ထားကြသည်။ သူသည် ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးချက်တွင် ဦးဆောင်ထားပါ သည်။ Nelle သည် "အိမ်ဆုတောင်းအစီအစဉ်" ကိုထောက်ပံ့ပေးကာ "ခေါင်းဆောင်" တစ်ဦး အနေဖြင့်လည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
[မိမိသမီးအတွက် Nelle Reagan ၏ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး Mrs. Mildred Neer ၏ပုံသက်သေလည်းဖြစ်သည်။ ကလေးမသည် မစားနိူင်မအိပ်နိူင်လောက်လောက် အောင်မိန်းကလေးက နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မိခင်ကလည်း အသင်းတော်ကိုသွားခဲ့သည်။ သူမက ဤသို့ဆိုသည်။]
အစီအစဉ်ပြီးသည့်အချိန်တွင် ကျွနု်ပ်သည် ထိုင်ခုံမှ မထနိူင်ဖြစ်နေ သည်။ နောက်ဆုံးတွင် မစ္စရီဂန်မှတပါး အားလုံးပြန်ကြပြီ။
"ကျွနု်ပ်သာ မစ္စရီဂန်ကိုစကားပြောလျှင်၊" သူ့ထံသွားပြီး ကျွနု်ပ်သမီးအ ကြောင်းပြောပြလျှင် "သူမကနောက်ဘက်အခန်းသို့သွားကြပါစို့" ဟုပြော မည်ဟု ထင်မိသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မစ္စရီဂန်က "ကျွနု်ပ် တို့ဒူးထောက်ဆုတောင်းကြရအောင်ဟုဆိုသည်။" သူမသည် အံ့ဖွယ်ကောင်း သောဆုတောင်းချက်ကိုပြုပြီး ကျွနု်ပ်တို့မတ်တပ်ရပ်သည့်အချိန်တွင် ဆု တောင်းခြင်း၏အဖြေကို ရရှိသည်ဟုခံစားမိသည်။ ကျွန်မအိမ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျွန်မသည် တံခါးခေါက်သံကြားလိုက်လို့ ဖွင့်လိုက်တော့ မစ္စရီဂန်ဖြစ်နေ သည်။ သူမသည် တစ်ညနေလုံးကျွန်မနှင့်အတူ ဆုတောင်းခဲ့သည်။ သူမ သည် ၆ နာရီလောက်ပြန်သွားခဲ့သည်။ ခဏကြသော် သမီးလေးကိုယ်ပေါ်ရှိ ပြည်တည်ရာအနာသည် တိုက်ချွတ်သွားသည်။ နောက်နေ့နံနက်တွင် ဆရာ ဝန်က "ဤသည်ကို ကျွနု်ပ်ခွဲစရာမလိုတော့ပါ" ဟုဆိုသည်။ ဘုရားသခင် သည် Nelle Reagan ၏ဆုတောင်းချက်ကို ဘုရားသခင်နားညောင်းပြီး အဖြေပေးခဲ့သည်။
....သူမသည် ထိုကဲ့သို့လက်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ခုပြုခြင်းတို့လုံး ဝမပြုပါ။ ဒူးထောက်ပြီးမျက်လုံးများကို မြှောက်ပင့်ကာ ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်ကိုတိုင် သိသကဲ့သို့၄င်း၊ သူနှင့်ယခင်က ဆက်ဆံမှုများစွာရှိ သကဲ့ သို့၄င်းလုပ်ဆောင် သည်မှာ သူ၏ဆုတောင်းသည့် နည်းလမ်း ပင်ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးသည် ဒုက္ခ ရောက်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် ဖျားနာ သည့်အချိန်တွင်လည်း ကောင်း Nelle သည် အိမ်သို့လာပြီး ဆုထောက် ဆုတောင်းပေးသည်။ သူပြန် ပြီးနောက်တွင် အရာအားလုံးကောင်းလာသည်။
…အရွယ်ရောက်လာသော Nelle ၏သားငယ်လေးကလည်း ဆုတောင်းခြင်း၏တန်ခိုးတွင် ခိုင် ခိုင်မာမာယုံကြည်လာသည်ဟူသည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
Nelle Reagan သည် သူ၏အသက်တာကို "ဆင်းရဲ့ချို့တဲ့သူများနှင့်မျှော်လင့်မဲ့သူ များ" အတွက် အပ်နှံထားပါသည်။ သူမ၏မိခင်သေခါနီးအချိန်တွင် မိမိကိုယ်ပိုင်မိခင်ကိုပြုလုပ် ရန် ပြောထားခဲ့ကြောင်း ဂတိတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ သူသည် ထိုအရာကို အထူးအာရုံစူးစိုက်ခဲ့ သည်။ သူမသည် ထောင်သို့ဦးဆောင်ပြီး အကျဉ်းခံထားရသူများအား ကျမ်းစာကို ဖတ်ပြထား ပါသည်။ သူမ၏အမှုတော်လုပ်ဆောင်ခြင်းအကျိုးအဖြစ် ရာဇဝတ်သားကောင်များသည် ၄င်းတို့ ၏အမူအကျင့်များကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာကြသည်။
[လူငယ်လူရမ်းကားတစ်ဦးသည် ထောင်ထဲတွင် Nelle နှင့်စကားပြောခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် သူလွတ်လာသောအခါ ယာဉ်တစ်စီးကို ရုတ်တရက်ဆွဲတွန်းပြီး ကား သမားကို သေနပ်ဖြင့်ချိန်ကာ သူမြတိုက်ရန် ကြံစည်ထားသည်။ သူကားမှထွက်လာသောအခါ သူက "ဘိုင်၊ ယာဉ်စီးနင်းခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်…နောက်ဘက်ထိုင်ခုံတွင် သေနပ်တွေ့ရ လိမ့်မည်" ဟုဆိုသည်။] ကျွနု်ပ် ဒါကို အသုံးပြုမည်။ သို့သော် ထောင်ထဲတွင် အမျိုးသမီးတစ် ဦးနှင့်စကားပြောခဲ့သည်။" Nelle Reagan သည် သူ့အား ရာဇဝတ်ပြုသည့်အသက်တာကို စွန့်ပစ်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၂၄ နွေရာသီတွင် သူမသည် နယူးယောက်မြို့တွင် ရုရှအသင်းတော်ကိုတည် ထောင်ရန် အတွက် သီးသန့်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာတစ်ခုကို တည်ထောင်ရန် ငွေများကိုမတည် အကူအညီပေးခဲ့သည်။ ၄င်းက [ကွန်မြူနစ်အောက်တွင်]ရုရှခရစ်ယာန်နှင့်အတူ စည်းလုံးညီ ညွတ်မှုကိုပြသသည့် အထိမ်းအမှတ်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
၁၉၂ရဧပြီလတွင် သူမသည် ဂျပန်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုကိုပြုလုပ်ကာ ခရစ်ယာန်ဘာသာပုံရိပ်ကို တည်ထားခဲ့သည်။
Nelle Reagan တွင် ဘုရားသခင်အတွက် လုပ်ဆောင်လိုသောနှလုံးသားရှိသည်။ သူမသည် ထိုယုံကြည်ခြင်းသည် သူမ၏သားရော်နယ်အပေါ်သက်ရောက်လာနိူင်စေရန် အကြောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုယုံကြည်ချက်က တစ်နေ့တွင် ကမ္ဘာကိုသိမ်းပိုဒ်ရန်မှာ သူမ၏ဆုတောင်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။
၁၉၂၂ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်တွင် အသင်းတော်ဖွင့်ပွဲလုပ်ဆောင်ပြီးသုံးရက်အကြာတွင် ဒတ်ချ်၊ ၄င်း၏အစ်ကို နီးလ်၊ နှင့်အခြားနှစ်ဆယ့်သုံးဦးတို့မှာ အသင်းတော်သစ်တွင် ပထမဆုံး နှစ်ခြင်းခံသူများပင်ဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ခြင်းခံရန်မှာ ရော်နယ်ရီဂန်၏ကိုယ်ပိုင်အယူအဆပင်ဖြစ်ပါ သည်။ သူက "ခရစ်တော်ကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့သည်" ဟုဆိုခဲ့သည်။
အရွယ်ရောက်လာသောအခါ (သမ္မတ) ရီဂန်သည် သမ္မာကျမ်းစာကို သူနှစ်သက် သောစာအုပ်အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ "ရေးသားဖူးသမျှသောစာအုပ်တွင် အကြီးမြတ်ဆုံး သောသတင်းစကား" အဖြစ်လည်းကောင်း ရည်ညွှန်းပြောဆိုထားသည်။ သူက ထိုစကားလုံး များသည် ဘုရားသခင်ထံမှအစပြုမှုတ်သွင်းထားသည်ဖြစ်၍ "လုံးဝသံသယမရှိ" ဟုဆိုခဲ့သည်။
[ရိုနယ် ] ရီဂန်သည် နှစ်ခြင်းခံပြီးနောက်တွင် [အသင်းတော်၏] အထူးတက်ကြွသော အသင်းသားဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ [ရီဂန်၊ ၄င်း၏မိခင်းနှင့်အစ်ကိုတို့သည် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် တူညီ သောအလုပ်ကို အမြဲလုပ်ဆောင်ကြသည်။ သူ့အစ်ကိုက အစီအစဉ်ကို ပြန်လည်သတိရစေ သည်။] "ဥပုတ်စာဖြေ တနင်္ဂနွေနံနက်၊ တနင်္ဂနွေအသင်းတော်အစီအစဉ်၊ ခရစ်ယာန် တနင်္ဂနွေညနေလုပ်ဆောင်မှု၊ ခရစ်ယာန်လုပ်ဆောင်မှုနောက်ပိုင်းအသင်းတော်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဆုတောင်းစည်းဝေးပွဲ စသည်တို့ ဖြစ်သည်။" အသက်ဆယ့်ငါးနှစ်တွင် ဒတ်ချ်သည် မိမိ၏ကိုယ် ပိုင် ဥပုတ်စာဖြေကျောင်းကို စတင်သင်ကြားသည်။ "ထိုသူငယ်များကြားတွင် သူသည် ခေါင်း ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်" ကို ငယ်ဘဝကသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဆေးဗီလာပမ်မားက ပြန်လည် အမှတ်ရပြောဆိုသည်။ "သူတို့က သူ့ကို မျှော်ကြည့်ကြသည်။"
ရိုနယ်ရီဂန်သည် ခရစ်ယာန်ကောလိပ်သို့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် သူသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည် သမ္မတအဖြစ် ကျမ်းကျိန်ဆိုမှုကို သူ၏လက်ဖြင့် သူ့မိခင်၏ကျမ်းစာအပေါ်ပြုလုပ်ပြီး "ဘုရားသခင် ကျွနု်ပ်ကိုကူမပါ" ဟုဆိုခဲ့သည်။
ရိုနယ်ရီဂန်သည် သမ္မတအနေဖြင့် ကျမ်းစာကိုအခြေပြု၍ သားဖျက်ခြင်းကို ဆန့်ကျင် ခဲ့ပါသည်။ သူက ဤသို့ဆိုထားသည်။
“အမေရိကန်၏ဂုဏ်အင်္ဂါလက္ခဏာသည် လူသားတို့၏အသက်၏အခွင့်အရေး တည်ဆောက်ခြင်းတွင် စိန်ခေါ်မှုမရှိခြင်းသည် သာ၍ကောင်းမွန်သည်ဟု ယုံ ကြည်သည်။ ထိုအခွင့်အရေးမရှိလျှင် အခြားအခွင့်အရေးများတွင် အဓိပ္ပါယ်မရှိ ပါ။ "သူငယ်တို့သည် ငါ့ထံသို့လာပါလေစေ။ မဆီးတားကြနှင့်။ ကောင်းကင်နိူင် ငံတော်သည် ထိုသူတို့၏နိူင်ငံဖြစ်သည်။"
သူ၏ ၁၉၈၆ ပြည်ထောင်စုမိန့်ခွန်းတွင် သူက ဤသို့ဆိုသည်။
ကျွနု်ပ်တို့နိူင်ငံ၏သြတ္တပ္ပစိတ်တွင် ထိခိုက်နာကျင်မှုရှိသည်။ အမေရိကန်ပြည် သည် ကျွနု်ပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်ပေးသောအသက်၏အ ခွင့်ထူးကို မမွေးဖွါးသေးသောသူများအားပေးရန် ငြင်းပယ်နေသ၍ ကျန်းမာ မည်မဟုတ်ဟုဆိုထားသည်။
သားဖျက်ချခြင်းဟူသည်မှာ သမ္မတအနေဖြင့် သဘောတူညှိနှိုင်းရန်ငြင်းပယ်ထားသည့် ကိုယ် ကျင့်တရားဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။
သမ္မတရီဂန်သည် သူအုပ်ချုပ်သည့်နယ်ပယ်ရှိ ဘုရားမဲကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုလည်း ဆန့် ကျင်ခဲ့သည်။ သူက ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကို "မကောင်းမှုနှင့်ပြည့်နှက်သောအင်ပါယာ" ဟု ခေါ်ထားသည်။ ဘာလင်ဝေါတွင်ပြုလုပ်သည့် ၄င်း၏ကြီးမားသည့်မိန့်ခွန်းတွင် သူက "Mr. Gorbachev ၊ ဤနံရံကို ဖြိုဖျက်လိုက်ပါ" ဟုဆိုခဲ့သည်။ သူက ဘုရားမဲကွန်မြူနစ်ဝါဒသည် ဆိုး သွင်းသောအရာဖြစ်သည်ဟု ဆုံးကြည်သည်။ သူက ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုက ချီတက်တိုက် ခိုက်ပြီ ဖြိုဖျက်မည်ကိုသိလျက်နဲ့ အမေရိကန်စစ်တပ်ကြီးကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သူက သိခဲ့ သည့်အတိုင်းပင် တကယ်ဖြိုဖျက်ခြင်းခံရသည်။ အခြားတစ်ဦးချင်းစီထက်ပင် ရိုနယ်ရီဂန်သည် "မကောင်းမှုနှင့်ပြည့်နေသောအင်ပါယာ" ၏အဆုံးသတ်အတွက် တာဝန်ရှိသူဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ တစ်လွှားပျံ့နှံနေသောကွန်မြူနစ်ဝါဒပပျောက်ရေးအတွက်လည်း တာဝန်ရှိသူဖြစ်သည်။ သူ၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိကိုရေးသားသူ Edmund Morris က " သူသည် မော်စကိုကို ခရစ်ယာန်ဖြစ်စေချင် သည်၊ ထိုအရာမှာအလွန်ရိုးစင်းသည်" ဟုဆိုပါသည်။ ထိုအပြင် ရိုနယ်ရီဂန်သည် သူ၏ဆု တောင်းချက်အမှန်တကယ်ပြည့်စုံလာသည်ကို ကြည့်မြင်ရန် အသက်ရှင်ခဲ့သည်။
ဤအမေများနေ့၊ ကျွန်ပ်သည် အမေများဖြစ်ကြသည့်သင်တို့အား မောရှေ၏အမေ ယောခေဗက်၊ နှင့် ကျွနု်ပ်တို့၏လေးဆယ်ယောက်မြောက်သမ္မတ၏မိခင် Nelle Reagan မှ ဆွဲထုတ်ရယူသည့်မှုတ်သွင်းခြင်းနှင့်အတူ ဤအသင်းတော်မှသွားစေလိုပါသည်။ ယေရှုခရစ် သည် သင်တို့၏နေရာတွင်၊ သင့်အပြစ်အတွက်ပေးဆပ်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံပြီး ကြောင်းသိစေလိုပါသည်။ ယေရှု၏အသွေးသည် သင့်အား အပြစ်မှ ဆေးကြောနိူင်ကြောင်းကို သိစေလိုပါသည်။ ယေရှုသည် သေခြင်းမှ ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်ထမြောက်တော်မူပြီး ဘုရားသခင်၏ လက်ယာတော်ဘက်တွင် အသက်ရှင်နေတော်မူကြောင်းကိုလည်း သိစေချင်ပါသည်။ သူ့ထံပါးသို့လာပြီး ယေရှုအားယုံကြည်ကိုးစားစေလိုပါသည်။ ထိုနောက် သင်သည် တနင်္ဂနွေ နေ့တိုင်း ဘုရားကျောင်းတွင် ရှိနေသည်ကိုလည်း သေချာစေပါ။ ယေရှုခရစ်အတွက်အသက် ရှင်ရန်အတွက် သင့်ကလေးများအား ၀ိညာဉ်ရေးရာဖိအားတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန် သေချာစေပါ။ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ အာမင်…။
သင်သည် Dr. Hymers ၏တရားဒေသနာကို အင်တာနက်ပေါ်တွင်
www.realconversion.com သို့မဟုတ် www.rlhsermons.com. ဖြင့် အပတ်စဉ်တိုင်း ကြည့်ရှုနိူင်ပါသည်။ “တရားဒေသနာစာမူ” ကိုနှိပ်ပါ။
သင်သည် Dr. Hymers အား အီးမေးလ် rlhymersjr@sbcglobal.net ဖြင့်လည်း ဆက်သွယ်နိူင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် စာအားဖြင့်လည်း ဆက်သွယ်နိူင်ပါသည်။
P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. ဖုန်း (၈၁၈)၃၅၂-၀၄၅၂
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို Mr. Abel Prudhomme ကဆောင်ရွက်သည်။ ဟေဗြဲ ၁၁း ၂၃-၂၇။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။ “ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းမည်”၊
Margaret J. Harris, ၁၈၆၅-၁၉၁၉ ရေးစပ်သည်။ )